कान्छो जिल्लाको विकासमा संघ र प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कान्छो जिल्लाको विकासमा संघ र प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्छ
कान्छो जिल्लाको विकासमा संघ र प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता December 12, 2018	0 139 Views
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पूर्व)
देशकै कान्छो जिल्ला रुकुम (पूर्व)मा तीनवटा गाउ“पालिका छन् । प्रदे श नम्बर पा“चको एक मात्र हिमाली जिल्ला
रुकुम (पूर्व) विकासको दृष्टिले पनि त्यति नै पछि परे को छ । दे शको ७७ औ ं जिल्लाका रुपमा रहे को रुकुम पूर्व विकट जिल्ला हो  । जहा अहिले सम्म एउटा पनि एम्बुले न्स छै न । एउटै वडाको सिमाना पार गर्न एकदिन लाग्ने रुकुमपूर्वको विकास र जनप्रतिनिधिको भूमिकाको विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले रुकुम (पूर्व) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गजे न्द्रबहादुर ओ लीसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
रुकुमपूर्व दे शको कान्छो जिल्ला हो , त्यहाको अवस्था के छ ?
दे शको कान्छो जिल्ला घो षणा त भयो तर एउटा जिल्लाका लागि चाहिने पूर्वाधार हुन् ती बनिसके का छै नन् । से वा प्रवाह पनि सो ही हिसावले हुन सके को छै न । तै पनि विभिन्न क्षे त्रका हिसावले सम्भावना बो के को जिल्ला हो यो  । कान्छो जिल्लालाई कसरी सबै भन्दा राम्रो बनाउने भन्ने चिन्ता सवै मा छ । मे रो आफ्नो कार्यकारी भूमिका नभए पनि कान्छो जिल्लाको समन्वय प्रमुखको है सियतले यहाको विकासका लागि समन्वय गनेर् प्रयास गरिरहे का छौ ं । यहा तीनवटा स्थानीय तह छन् । यी सबै स् थानीय तह, जनप्रतिनिधि र त्यहा“ कार्यरत कर्मचारीस“ग समन्वय गरे र जिल्लाको विकासमा अघि बढे का छौ ं ।
जिल्लाका लागि न्यूनतम आधार तयार गर्न किन समस्या भो  ?
जनतास“ग जो डिएका सरकारी कार्यालय स् थापना भएको अवस् था छै न । ढिलै भए पनि के ही कार्यालय भर्खर स् थापना भएका छन् । तर ती कार्यालयमा जनशक्ति छै न । जसले गर्दा भने को जस् तो से वा प्रवाह हुन सके को छै न ।
स्थापना भएका कार्यालय कति छन् ?
झण्डै एक वर्षको अन्तरालमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, सशस् त्र प्रहरी, से ना, मालपो त, नापी, हुलाक, जनस् वास् थ, सिंचाई डिभिजन र भर्खरै घरे लु कार्यालय स्थापना भएका छन् । अरु त के यी कार्यालयमा पाहुना जादा बस्ने कुर्सी, टे बुल पनि छै नन् । जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नो कार्यालय छै न । अहिले सम्म भाडामा छौ ं । बिडम्वना के छ भने सरकारले कार्यालयका लागि बजे ट पनि दिदै न । आन्तरिक स्रो त पनि छै न । छ महिना भयो, हामीले कार्यालयको भाडा समे त तिर्न सके का छै नौ ं ।
सदरमुकामकै विवादले अरु कुरामा ध्यान पुगे न कि ?
हो  । हामीले सो च्दै नसो चे को ठाउ“मा तत्कालीन सरकारले सदरमुकाम तो क्यो  । हिजो पनि १२ वर्षसम्म सदरमुकाम बसे को रुकुमको ट अञ्चलाधीशको ठाडो आदे शमा अन्यत्र सारियो  । त्यो हिसाबले पनि त्यहा“का जनतामाथि अन्याय भएको थियो  । अहिले पनि नया“ जिल्ला घो षणा भएपछि करिव करिव सबै को सहमति के थियो भने जिल्लाको सदरमुकामका लागि रुकुमको टको विकल्प छै न है भन्ने थियो  । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ने पाली कांग्रे स ने तृत्वको तत्कालीन सरकारले गो लखारा सदरमुकाम राख्ने घो षणा ग¥यो  । यसले गर्दा घरभित्र झगडाको स् िथति पनि छ । जसले अन्य कुरामा ध्यान पुगे न कि भन्ने कुरा स् वाभाविक छ तर सदरमुकामकै विवादले अरु काम रो कियो भन्ने हो इन । कर्मचारी व्यवस् थापन गर्न राज्यले ढिलाइ गरे का कारणले समस् या भएको हो  ।
नीति, कार्यक्रम र बजेट आफै ल्याउने अवसर छ पालिकामा, रुकुमपूर्वमा सडक र सञ्चार पु¥याउनुभयो त ?
हो  । स्थानीय तहमा अधिकार आइपुगे को छ । यति हुदाहुदै पनि रुकुम पूर्व जनसंख्याको हिसाबले थो रै भूगो लका हिसाबले धे रै र तितरवितर वस् ती छ । एउटा वडाबाट अकोर् वडा पुग्न एकदिन लाग्छ । यस् तो हु“दाखे री समस् या छ । सडकले छो एकै छै न भन्ने त हो इन, छ । सडक सञ्जालको विस् तार पनि वडा, गाउ“सम्म पु¥याउने काम भइरहे को छ । यस् तै मध्यपहाडी, शहीद मार्ग अरु विभिन्न ग्रामीण सडकहरुलाई स् थानीय तह आफै ले पनि तीब्ररुपमा अघि बढाइरहनुभएको छ । यति गर्दागदैर् पनि एउटा गाउ“लाई अकोर् गाउ“सम्म जो डौ ं भन्दा भन्दै पनि भौ गो लिक कठिनाइले समस् या भएको छ । सा“च्चै भन्ने हो भने रुकुम पूर्वमा विकासका लागि भूगो ल बाधक बने को छ । तर सञ्चारको अवस् था अलि सुधार भएको छ । भर्खरै सिस् ने गापाको प्वाङमा नमस् ते को टावर निर्माण भएको छ । पुथामा दुईवटा टावर छन् । तर अझै पनि त्यस् ता गाउ“ छन् अहिले को सदरमुकाम आसपासमै सञ्चार सुविधा छै न । त्यसका लागि हामीले दूरसञ्चारसग र हाम्रो ने तृत्वस“ग पनि बारम्वार भन्ने काम गरे का छौ ं । कतिपय ठाउ“मा सर्भे पनि भएको छ तर काम गर्दा ढिलासुस् ती जहा पनि छ । यसले समस् या नागरिकहरुले सो चजस् तो , हामी जनप्रतिनिधिले चाहे जस् तो सूचना सञ्चार विस् तारको काम पनि हुन सके को छै न ।
एउटा वडाबाट अकोर् वडा पुग्न एकदिन लाग्ने अवस् था कहिले अन्त्य हुन्छ ?
संघीय संरचना भने को नागरिकलाई नजिकबाट से वा दिने हो  । तर हाम्रो भौ गो लिक कठिनाइका कारणले गर्दा यो नारा मात्रै जस् तो भएको छ । जस् तो सिस्ने गाउपालिकाको वडा नं. १ बाट पालिकाकै के न्द्र आउन एक दिन लाग्छ । न सडक छ । तत्काल सडक सञ्जाल पु¥याउ“ भने र जतिसुकै प्रयास गरे पनि सकिने अवस् था छै न । पुथाको सबै भन्दा माथि पे ल्माबाट के न्द्रसम्म आउन अहिले एकदिनमा पनि आउन सकिने अवस्था छै न । मै ले दे खे को विकल्प पहिलो स् थानीय तहको बृद्धि गर्नुपर्छ । तीन तह छ । त्यसलाई बढाएर पाच पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो  । पुथालाई दुई तहमा विभाजन गर्नुपर्छ । हिमाली जिल्ला हो  । जस् तो मनाङमा चारवटा तह छन् । थो रै जनसंख्या छ तर हाम्रो जनसंख्या धे रै छ । हाम्रो मा धे रै स्थानीय तह किन नहुने ? हिमाली जिल्ला त हाम्रो पनि हो  । त्यसै ले पुथालाई दुई र सिस्ने लाई पनि दुई स् थानीय तह बनाउने र अहिले को सिस्ने को रुकुमको ट र भुमे को के ही भाग काटे र नगरपालिका बनाउन सकियो भने सहजता हुन्छ भन्ने हो  । अकोर् चाहि“ सडक सञ्जालबाट सबै क्षे त्रलाई जो ड्ने नै हो  । मुख्य कुरा सडक सञ्जाल र सञ्चारलाई जो ड्न सकियो भने के ही सहजता हुन्छ तर तत्काल यो पनि सम्भावना छै न ।
बजे टमा प्राथमिकता दिनुप¥यो भन्नु भएको छ कि छैन राज्यलाई ?
तपाइहरुले हामीले पटक पटक भने का छौ ं । हाम्रो जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदे शसभामा प्रतिनिधित्व गनेर् जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । प्रदे शसभाको सभामुख हाम्रै जिल्लाको हुनुहुन्छ । प्रदे शसभाको भौ तिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पनि हाम्रै जिल्लाको हुनुहुन्छ । दबाब दिने कुरा हामीले दिएका छौ ं । हिमाली र तराई जिल्लाको एउटै तुलना गर्नुह“ुदै न भने का पनि छौ ं । तराईमा धे रै भए एक÷दुईवटा रुख काटनुपर्ला विकास गर्न तर हामीले ठूला–ठूला पहाड फो ड्नुपर्छ । अहिले त जहा“ विकास भएको छ त्यसलाई झन राम्रो बनाउन बजे ट के न्द्रित गनेर् तर नभएको ठाउमा खासै हे र्ने चलन सरकारको छै न । हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा त झन नया जिल्ला हो  । मै ले माथि पनि भनें जिल्ला समन्वय समिति भाडामा बसे को छ र छ महिनादे खि भाडा तिर्न सकिएको छै न । के न्द्र, प्रदे श कतै बाट भाडाको व्यवस्था गरिएको छै न । हामी त अब कहा गएर बस्ने हो भन्ने स् िथति अहिले पनि छ ।
भर्खरै प्रदे श सरकारका मन्त्रीहरु जानुभयो  । समन्वय समितिको कार्यालयमा फर्निचर छै न । हामीले उहाहरुलाई बसाल्न अरु कार्यालयबाट फर्निचर मागे र ल्याउनुपर्ने स् िथति सिर्जना भयो  । त्यो कुरा हामीले मन्त्रीलाई पनि भने का छौ ं । नय जिल्ला हो गाडी छै न । कतै अनुगमनमै जानुप¥यो भने हिडे र जानुपनेर् अवस्था छ । पाच नम्बर प्रदे शको एउटा मात्रै यो हिमाली जिल्ला हो  । जहा सबै संरचना नया बनाउनुपनेर् छ । यो दुर्गम जिल्ला हो  । त्यसै ले के न्द्र र प्रदे शले त्यही हिसाबले हे र्नुपनेर् हो  । हाम्रो विशिष्टतालाई बुझ्ने प्रयास भएको छै न ।
सडक र सञ्चार पु¥याउन कति समय लाग्ला यही अवस्थामा ?
सञ्चार अलि छिटो हुन्छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुकै कार्यकालमा सञ्चार पु¥याउन सकिन्छ हो ला । सडकको क्षे त्रमा त अझै समय लाग्ने दे खिन्छ । उहा“हरुले आफ्नो कार्यकालमा जिल्लाका सबै वडाहरुमा सडक सञ्जाल पु¥याउने अवस् था छै न । किनभने भौ गो लिक विकटताका कारणले समस् या छ ।
स्वास्थ्यको पहुच कस्तो छ ?
स् वास् थ्य संवे दनशील क्षे त्र हो  । हामीस“ग एउटा स् वास् थ्य के न्द्र को लमा छ । एउटा स् वास् थ्य चौ की रुकुमको टमा छ । जसलाई हामीले जिल्ला अस् पतालको रुपमा विकास गनेर् यो जनामा छौ ं । के न्द्र र प्रदे श सरकारस“ग माग गरे का छौ ं । कसै ले सुने को अवस् था छै न । अहिले प्रदे शको सामाजिक विकास मन्त्री त्यहा पुगे पछि जिल्ला अस् पताल भन्दा पनि १५ शै øयाको अस् पतालमा रुपान्तरण गरौ ं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र जिल्ला अस् पतालका लागि के न्द्रमा पहल गरांै भन्नुभएको छ । स् वास् थ्य पहु“चको कुरा त के गरिसक्नु छ र ? सुत्के री व्यथाका कारण आमाले ज्यान गुमाउनुपनेर् अवस् था छ । हे लिको प्टर चार्टर गरे र लै जानुपनेर् अवस् था छ । सबै का लागि हे लिको प्टर सम्भव छै न । दुई तीन दिनसम्म बो के र हिड्दा पनि गाडी भे टिने अवस् था छै न । नजिक स् वास् थ्य चौ की छै न । भए पनि स्वास्थ्यकर्मी छै नन् । हिमाली जिल्ला भए पनि त्यो अनुसारको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई से वा सुविधा छै न । त्यसकारणले स्वास्थ्यमा सहज पहुच छै न । जिल्लामा एउटा पनि एम्बुले न्स छै न । एम्बुले न्स भए पनि सडक पुगे को ठाउ“बाट से वा लिन सकिन्थ्यो  । हामीले अहिले माग गरे का छौ ं । कम्तिमा दुई तीनवटा एम्बुले न्स हुन्थ्यो भने सडक पुगे को ठाउ“का जनताले स् वास् थ्य से वा पाउन सक्थे  ।
सम्भावनाको कुरा गर्दा पा“च नम्बरको एक मात्र हिमाली जिल्ला हो तर यसलाई क्यास गर्न सकिएन कि ?
त्यो त सूचीकरणमा हे र्दा एक मात्र हिमाली जिल्ला भने र उल्ले ख गरिएको छ पा“च नम्बर प्रदे शको  । तर यहा“का कुनै पनि राष्ट्रसे वकले हिमाली जिल्लाको से वा सुविधा पाउन सके का छै नन् । शिक्षकहरु आन्दो लित छन् । जुन हिसावले यसलाई प्रचारप्रसारमा ल्याउनुपथ्योर् त्यो हुन नसके को पनि हो ला । यसलाई दे शकै नमूना जिल्लाका रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो तर राज्यस“ग इच्छाशक्ति हुनुप¥यो नि ! विभे दपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुप¥यो  । यहा“सम्म कि एउटा कार्यालय स् थापना हुन सके को छै न । भएका कार्यालयमा फर्निचर किन्न सक्ने अवस्था छै न । कार्यालयमा जनशक्ति पूरा गर्न सके को छै न भने अरु कुरा के हुनसक्छ ?
जिल्लावासीले पनि माल पाएर चाल पाएनन् भन्छन त ?
हामीले भने का छौ ं । हामीले त पर्यटन, कृषि, जडीबुटीको क्षे त्रमा यो –यो सम्भावना छ भने कै छौ ं । पशुपालनलगायतका
विभिन्न क्षे त्रमा यो सम्भावना छ भने का छौ ं । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा त्यहीं पाइन्छ । विभिन्न एक सय प्रजातिका जडीबुटी
त्यहा“ पाइन्छ । त्यही ढो रपाटन शिकार आरक्ष छ । ताल, पो खरी, पुथा, सिस्ने हिमाल यहीं छन् भने र हामीले राज्यसग भने का छौ ं यसको विकासका लागि यो गर्न सकिन्छ पनि भने का छौ ं । हामीले तीनवटै स्थानीय तहको गुरुयो जना पनि निर्माण गरे का छौ ं । त्यसलाई राज्यसमक्ष प्रस् तुत पनि गरे का छौ ं तर राज्यले सुने को छै न ।
आफ्नै पहिचान झल्किने युद्ध पर्यटनका कुरा कति गर्नुभयो  ?
हामीले गुरुयो जनामा समे टे का छौ  । गुरिल्ला टे «ल, जनयुद्धकालका थुप्रै संरचनाहरुलाई संरक्षण गरे र राखे का छौ ं । भुमे गाउ“पालिकाको छ नम्बर जहा“बाट युद्ध शुरु भयो र शान्तिको शुरुवात पनि त्यहींबाट भयो  । शहीद पार्क निर्माण, तत्कालीन बङकरको संरक्षण अहिले पनि गरिएको छ । जहा“ जनयुद्धमा थुप्रै सफलता र असफलता दुबै पाएको ठाउ“ हो  । त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम हामीले गरे का छौ ं र भने का पनि छौ ं । तर सुनुवाइ भएको अवस् था छै न ।
कान्छो जिल्लाको समग्र विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?
यहा“को विकासका लागि गुरुयो जना बने का छन् । गुरुयो जना अनुसार स् थानीय तहले काम गर्नुप¥यो । प्रदे शले पनि र संघले पनि गुरुयो जनालाई फलो गरे र काम गर्न सके मा विकास हुन्छ । सबै भन्दा सडक, सञ्चार र विद्युतको पहु“चमा नागरिकलाई पु¥याउने कुरा नै विकास हो  । यो काम गर्नतिर स् थानीय सरकार लागे का छन् ।
जनप्रतिनिधि नै डो जर किने र कमाउमा लागे भन्ने सुनिन्छ नि ?
जनप्रतिनिधि नै प्रत्यक्ष डो जर किने र कमाउमा लागे भन्ने कुरा त गलत हो  । त्यस् तो छै न । बाहिर हल्ला फै लाइएको छ । भो लिका दिनमा के गर्छन् हे र्न बा“की छ तर अहिले सम्म त्यस्तो छै न ।
तपाइ त जनप्रतिनिधिभन्दा पहिला ने कपाको कार्यकर्ता पनि हो  । जनयुद्धका लिखतका कारण जनताले दुःख पाइरहे का छन् अहिले  पनि ?
यो जटिल रुपमा दे खिएको छ । यो दुईवटै रुकुम, जाजरको ट, सल्यानमा अलि बढी छ । हिजो जनसत्ताले जग्गा पास गरिदियो  । हामी आफै ले पनि त्यो काम गरे का छौ ं । एउटा खालको विश्वास पनि दिलाइयो  । जनताले जनसत्तामा आएर पास पनि गरे  । तर शान्तिकालपछि यो समस् याका रुपमा आएको छ । अहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम पनि भएको छ । त्यसै ले राज्यले यस विषयमा के ही निर्णय लिनुपर्छ । राज्यले चाहे मा जे पनि गर्न सक्छ । हामीले त राज्यलाई भने का छौ ं । डाक्टर बाबुराम भटराईदे खि पार्टी अध्यक्षद्वयलाई पनि यो समस् याबारे थाहा छ । त्यसै ले राज्यले के ही गर्नुपर्छ । यसको निकास बे च्ने र किन्ने मान्छे दुबै मर्कामा पर्नुह“ुदै न ।
अन्त्यमा, एक मात्र हिमाली र देशकै कान्छो जिल्लाले प्रदेशको केन्द्रबारेमा के सोचेको छ ?
हाम्रो कुरा स् पष्ट छ । पहिले पनि र भविष्यमा पनि । आउजाउको हिसाबले त दाङ नै हुनुपथ्योर् । प्रदे शका सवै लाई पायक पनेर् ठाउ भने को दाङ हो  । सबै हिसाबले दाङ भन्दा भन्दै पनि बुटवल अस् थायी के न्द्र बनाउ“दा हामी मर्कामा छौ ं । त्यसै ले दुई तिहाइ हो इन सहमतिमा दाङ तो किनुपर्छ ।
Previous: हेलो नेपालको टावर अलपत्र, मजदूर ठगिए
Next: पुरन्धारा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको ताँती
सामुदायिक विद्यालय सुधार्न दशकीय कार्यक्रम
प्रकृति खुशी पार्न भूमे मनाउँछौं
आनीबानीमा सुधार गरे वातावरण स्वच्छ बन्छ